Ny ampahany amin'ny sela: toetra sy fiasa | Green Renewable
Fantatsika fa ny sela no singa fototra miasa amin'ny sela rehetra amin'ny biby sy ny zavamaniry. Amin'ity tranga ity, ny biby dia heverina ho zavamananaina multicellular, noho izany dia manana sela mihoatra ny iray izy ireo. Ny karazana sela izay ananany matetika dia ny sela eukaryotic ary mampiavaka azy amin'ny fananana tena nokleary sy organelle manokana samihafa. Na izany aza, misy isan-karazany ampahany amin'ny sela ary samy manana ny asany ny tsirairay.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny faritra samihafa amin'ny sela sy ny tena maha samy hafa ny sela biby sy ny sela zavamaniry.
1 ampahany amin'ny sela
1.2 plasma membrane sy cytoplasm
1.3 Endoplasmic reticulum sy Golgi apparatus
1.4 Centrosome, cilia ary flagella
1.5 mitochondria sy cytoskeleton
2 Fahasamihafana eo amin'ny sela biby sy zavamaniry
Izy io dia organelle manokana amin'ny fanodinana sy fikarakarana ny fampahalalana finday. Ny sela eukaryotic dia matetika manana nokleary tokana, saingy misy ny maningana ahafahantsika mahita nokleary maromaro. Ny endrik'io organelle io dia miovaova arakaraka ny sela misy azy, fa matetika izy io dia boribory. Ny fototarazo dia voatahiry ao amin'ny endrika ADN (asidra deoxyribonucleic), izay tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny asan'ny sela: manomboka amin'ny fitomboana ka hatramin'ny fananahana. Misy rafitra hita maso ihany koa ao anatin'ny nucleus antsoina hoe nucleolus, izay miforona amin'ny fifantohana amin'ny kromatin sy proteinina. Ny sela mammalia dia manana nucleoli 1 hatramin'ny 5.
plasma membrane sy cytoplasm
Ny membrane plasma no rafitra manodidina ny sela ary misy ao amin'ny sela velona rehetra. Izy no miandraikitra ny famehezana ireo votoaty ireo sy miaro azy ireo amin'ny tontolo ivelany, tsy midika akory izany fa membrane famehezana izy io satria izy io dia manana mason-koditra sy rafitra hafa izay tsy maintsy mandalo molekiola sasany mba hanatanterahana ny fizotran'ny sela biby.
Ny cytoplasm amin'ny selan'ny biby dia ny habaka eo anelanelan'ny membrane cytoplasmique sy ny nucleus, izay manodidina ny organelles rehetra. Rano 70% no misy azy ary ny ambiny dia fifangaroana proteinina, lipida, gliosida ary sira mineraly. Ity fitaovana ity dia tena ilaina amin'ny fampivoarana ny fahafahan'ny sela.
Endoplasmic reticulum sy Golgi apparatus
Ny reticulum endoplasmique dia organelle miendrika kitapo fisaka sy tubule mifanaingina, mizara habaka anatiny mitovy. Ny reticulum dia voalamina amin'ny faritra maromaro: ny reticulum endoplasmic rovitra, miaraka amin'ny membrane mipetaka sy ribosomes mifandray, ary ny reticulum endoplasmic malamalama, tsy ara-dalàna kokoa ny endriny ary tsy misy ribosomes mifandray.
Izy io dia fitambarana fonon-tsela mitovitovy amin'ny tanky tompon'andraikitra amin'ny fizarana sy fanaterana vokatra simika avy amin'ny sela, izany hoe ivon'ny selan'ny sela. Izy io dia miendrika toy ny komplex Golgi na fitaovana ao amin'ny selan'ny zavamaniry ary misy ampahany telo: ny sac membrane, ny tubule izay itaterana akora miditra sy mivoaka avy ao amin'ny sela, ary farany ny vacuole.
Centrosome, cilia ary flagella
Ny centrosome dia toetra mampiavaka ny selan'ny biby ary rafitra cylindrical poakaty misy centriole roa. mirindra mifanandrify. Ny firafitry ity organelle ity dia voaforon'ny tubule proteinina, izay manana asa tena manan-danja amin'ny fizarazarana sela satria izy ireo no mandamina ny cytoskeleton ary miteraka ny spindle mandritra ny mitosis. Afaka mamokatra cilia na flagella koa izy io.
Ny cilia sy ny flagella amin'ny selan'ny biby dia fanampin'ny microtubules izay manome fluid ny sela. Ao amin'ny zavamananaina tokana izy ireo ary tompon'andraikitra amin'ny fihetsehan'izy ireo, fa amin'ny sela hafa kosa dia ampiasaina izy ireo mba hanafoanana ny fiasan'ny tontolo iainana na ny fahatsapana. Amin'ny ankapobeny, ny cilia dia betsaka kokoa noho ny flagella.
mitochondria sy cytoskeleton
Mitochondria no taova ao amin'ny selan'ny biby izay ahatongavan'ny otrikaina izy ireo dia miova ho angovo amin'ny dingana iray antsoina hoe respiration. Miendrika lavalava izy ireo ary manana fonon-tanana roa: ny fonon-tany anatiny miforitra mba ho crista ary ny fonon-tany ivelany. Ny isan'ny mitochondria ao amin'ny sela tsirairay dia miankina amin'ny asany (ohatra, ao amin'ny sela hozatra dia hisy mitochondria betsaka).
Mba hamenoana ny lisitry ny ampahany lehibe amin'ny sela biby, dia miresaka momba ny cytoskeleton isika. Izy io dia vita amin'ny filamenta maromaro misy ao amin'ny cytoplasm ary, ankoatra ny asany amin'ny famolavolana sela, dia manana ny asan'ny organelles koa izy.
Fahasamihafana eo amin'ny sela biby sy zavamaniry
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny ampahany amin'ny sela biby sy zavamaniry. Andeha hojerentsika hoe inona ny fahasamihafana lehibe:
Sela sela Misy rindrin'ny sela ivelan'ny membrane plasma izay tsy ananan'ny biby. Toy ny hoe misy coating faharoa manarona azy tsara kokoa. Ity rindrina ity dia manome azy henjana lehibe sy fiarovana bebe kokoa. Ity rindrina ity dia ahitana cellulose, lignin ary singa hafa. Ny singa sasany amin'ny rindrina sela dia manana fampiharana sasany amin'ny sehatra ara-barotra sy indostrialy.
Tsy toy ny sela biby, fa misy klôleoplast ao anatiny ny sela. Ny klôleoplast dia ireo izay manana pigment toy ny chlorophyll na carotene izay mamela ny zavamaniry hanao photosynthesize.
Ny selan'ny zavamaniry dia afaka mamokatra ny sakafony manokana noho ny singa tsy organika sasany. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny fisehoan'ny fotosintesis. Ity karazana sakafo ity dia antsoina hoe autotrophic.
Ny sela biby, etsy ankilany, dia tsy manana fahaizana mamokatra ny sakafony avy amin'ireo singa tsy voarindra. Noho izany, ny sakafo mahavelona dia heterotrophic. Ny biby dia tsy maintsy mampiditra sakafo biolojika toy ny biby hafa na ny zava-maniry ihany.
Ny selan'ny zavamaniry dia mamela hiova angovo simika ho angovo ho angovo masoandro na hazavana noho ny dingan'ny photosynthesis.
Ao amin'ny sela biby, ny mitochondria dia manome angovo.
Ny cytoplasm amin'ny selan'ny zavamaniry dia misy vacuole lehibe ao amin'ny 90% amin'ny habaka. Indraindray dia misy vacuole lehibe iray ihany. Ny vacuoles dia mitahiry vokatra isan-karazany avy amin'ny metabolism. Ankoatr'izay, dia manafoana ireo vokatra fako isan-karazany izay mitranga amin'ny fanehoan-kevitra metabolika mitovy. Ny selan'ny biby dia manana vacuoles saingy kely dia kely izy ireo ary tsy maka toerana betsaka.
Ao amin'ny selan'ny biby isika dia mahita organelle izay atao hoe centrosome. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fizarana ny krômôzôma mba hamoronana ny selan'ny zanaka vavy, fa amin'ny selan'ny zavamaniry dia tsy misy organelle toy izany.
Ny selan'ny zavamaniry dia manana endrika prismatic, fa ny selan'ny biby kosa samy manana ny endriny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny ampahany amin'ny sela sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » ampahany amin'ny sela